သားသားမီးမီးတို့အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့် ဟင်းချက်ဆီ
ကလေးတစ်ယောက်အတွက် စားသုံးသမျှက ဘေးကင်းပြီး အာဟာရဖြစ်ဖို့ လိုပါမယ်။ ဒါကြောင့်လည်း မေမေတွေက အစားအစာ ရွေးချယ်တဲ့အခါ အိမ်မှာ ကလေးရှိလာရင် ပိုဂရုစိုက်လာ​ကြတာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကလေးတွေ အစားစစားချိန်မှာ ဘယ်လို ဟင်းချက်ဆီကို သုံးရမလဲဆိုတာ တွေးရခက်နေတဲ့ မေမေတွေအတွက် ဟင်းချက်ဆီ ရွေးချယ်နည်းလေး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ကလေးက ဆီစားသုံးဖို့ လိုသလား …………
ကလေးတွေက ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အဆီကို လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးက လမ်းစလျှောက်တတ်ပြီဆိုရင် ဦးနှောက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ် အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အဆီကို လိုအပ်ပါမယ်။
ဒီကာလမှာ မေမေဖေဖေတို့အနေနဲ့ ကလေးကို ဝမှာစိုးတယ်ဆိုပြီး အဆီကို လုံးဝမကျွေးတာမျိုး မလုပ်စေချင်ပါဘူး။ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ အရှိန်ယူနေတဲ့အချိန်မှာ ကလေးကို လုံလောက်တဲ့ အဆီပမာဏ ဖြည့်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။ ဒါမှ ကလေးက ရှိသင့်တဲ့ အရပ်အမြင့်နဲ့ကိုယ်အလေးချိန်ကို ရရှိမှာပါ။ ဦးနှောက်နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပါ အကောင်းဆုံး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေမှာပါ။
ဒီတော့ အဖြေကတော့ ရှင်းပါတယ်။ ကလေးတွေက ဆီစားသုံးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးကို အဆီဓာတ် ပြည့်ဝစေဖို့ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ဆီအမျိုးအစားကို သေချာလေး ရွေးချယ်မိဖို့ လိုပါမယ်။ ဒီတော့ ကလေးကို ကျန်းမာတဲ့ အဆီဓာတ် ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်ပေးမိစေဖို့ အသင့်တော်ဆုံး ဆီဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ…………..
ကလေးတွေ ကျန်းမာရေးအတွက် အဆီဓာတ်က ဘယ်လိုထောက်ပံ့ပေးလဲ……….
အဆီမှာပျော်ဝင်လွယ်တဲ့ ဗီတာမင် A၊ D၊ E နဲ့ K တို့ကို စုပ်ယူနိုင်စေဖို့ အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။
ဟော်မုန်း ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက် အထောက်အပံ့ပေးတယ်။
ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ နဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးတယ်။
အာရုံကြောစနစ်ကို ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးစေတယ်။ (အာရုံကြောလေးတွေရဲ့ အပြင်လွှာ myelin sheath ဆိုတာ အဆီနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားတာပါ။)
ကလေးတွေအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့်ဆီ ရွေးချယ်မယ်
ဈေးကွက်ထဲမှာ ရွေးချယ်စရာ ဆီအမျိုးအစားတွေက တော်တော်များပါတယ်။ လူကြီးတွေအနေနဲ့ မသိသာပေမယ့် ကလေးတွေအတွက်တော့ ကျန်းမာရေးနဲ့အညီညွတ်ဆုံးဆိုတာကမှ အဆင်ပြေမှာပါ။ ကလေးတစ်ယောက်က ဖြည့်စွက်စာစားမယ်ဆိုရင် အစားအစာတွေထဲမှာ မဖြစ်မနေဆီထည့်စားတော့မှာပါ။ အရင်ထက်လည်း ပမာဏ များလာပါပြီ။ ဒီကာလမှာ ကလေး ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အဆီဓာတ်ကို အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ယမ့် ဆီအမျိုးအစားကနေ ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ကလေးက လူကြီးတွေလို ဆီဖြစ်ရင်ပြီးရော စားလို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် သေချာလေး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ ကလေးတွေအနေနဲ့
ကလေးတွေကို ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်ကျွေးချင်တဲ့အခါ ထောပတ်ကို သုံးလို့ရသလို ထောပတ်အစား canola ဆီကို အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။ canola ဆီက အစားအစာတွေကို အရသာကောင်းစေသလို ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အမြင်အာရုံ ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ omega-3-fatty acids ပါဝင်နေပါတယ်။
သံလွင်ဆီမှာ နှလုံး ကျန်းမာစေတဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင် ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ကလေးကို သံလွင်ဆီလေးနဲ့ မုန်လာဥနီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း စတာတွေကို သုပ်ကျွေးတာက အဆင်ပြေမှာပါ။ သံလွင်ဆီက ကလေးတွေရဲ့ လျှာထဲမှာ နည်းနည်းတော့ အရသာ ပြင်းနိုင်ပါတယ်။
အာရှဒေသ တော်တော်များများမှာ အသုံးများကြပါတယ်။ ဟင်းချက်တဲ့အခါမှာသုံးသလို ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုပြီး လိမ်းကျံ အသုံးပြုကြတာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ အရသာက နည်းနည်း ခါးသက်သက်လေးဆိုပေမယ့် ကလေးတို့အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ omega fatty acids ပါဝင်နေပါတယ်။ ကလေးကို အရိုးတွေ သန်မာစေပြီး နှလုံးကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။
နေကြာစေ့ကနေ ထုတ်ထားတဲ့ နေကြာဆီက ဗီတာမင် E နဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင် အာနိသင် ကြွယ်ဝပါတယ်။ နေကြာဆီက ကလေးတွေကို နှလုံး ကျန်းမာစေနိုင်သလို ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့လည်း အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပဲဆီက ကလေးတိုင်းနဲ့ မတည့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ ကလေးက မြေပဲနဲ့ ဓာတ်မတည့်ဘူးဆိုရင်တော့ မြေပဲဆီ မကျွေးတာက အဆင်အပြေဆုံး ဖြစ်မှာပါ။ ပဲဆီက ဗီတာမင် E နဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
အုန်းဆီမှာ lauric acid ပါဝင်တာကြောင့် ရောဂါပိုးတွေ ကူးစက်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ အရေပြားကို အာဟာရဖြည့်ပေးပြီး သွားပေါက်ချိန်မှာ သွားဖုံးနာတာကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ အရေပြားက နေလောင်ကွက် သက်သာစေဖို့လည်း အသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်။ အုန်းဆီက ကလေးရဲ့ ဦးနှောက် ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ အုန်းဆီက ကလေးတွေအတွက် အကျိုးများတာ မှန်ပေမယ့် မကျွေးခင်မှာ ဓာတ်တည့်ရဲ့လား ဆိုတာကို သေချာလေး ဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါမယ်။
နှမ်းကြတ်စေ့ဆီက ကလေးအတွက် သင့်တော်တယ်ဆိုပေမယ့် အသက် ၃ နှစ်ပြည့်မှ ကျွေးသင့်ပါတယ်။ နှမ်းကြတ်စေ့ဆီက အများကြီး သုံးဖို့ မလိုပါဘူး။ အ​ကြောင်းကတော့ ကလေးက နှမ်းကြတ်စေ့ဆီမှာပါတဲ့ အာဟာရဓာတ်ကို Omega-3 fatty acid အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ အင်ဇိုင်း လုံလောက်အောင် မထုတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
အဆီဓာတ် ပါဝင်မှုနည်းတာကြောင့် လူကြီးတွေအတွက် သင့်တော်တယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တယ်ဆိုပေမယ့် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက် အာဟာရ ပြည့်ဝဖို့လိုနေတဲ့ ကလေးတွေအတွက်ကတော့ သင့်တော်လှတယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုပြောရတာက ဟင်းရွက်ဆီက Omega-3 fatty acid ပါဝင်မှု နည်းတာကြောင့်ပါ။ ကလေးကို ပဲပိစပ်ဆီ၊ ဟင်းရွက်ဆီ စတာတွေကို မကျွေးတာက အဆင်အပြေဆုံးပါ။
အဆီက ကလေးတွေ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ လိုတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်နေ့တာလိုအပ်တဲ့ ပမာဏထက် ပိုမကျွေးဖို့ သတိထားရမှာပါ။ ဒါ့ပြင် တိရစ္ဆာန်တွေကရတဲ့ ပြည့်ဝဆီတွေကိုလည်း ရှောင်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကဲ….. အိမ်က အိန်ဂျယ်လ်လေးနဲ့ သင့်တော်မယ့် ဆီအမျိုးအစားကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုက်ပါ မေမေတို့ရေ…………….
Which is the Best Cooking Oil for Babies? https://www.mylittlemoppet.com/which-is-the-best-cooking-oil-for-babies/ Accessed Date4June 2020
Which Cooking oil is good for children https://healthylife.werindia.com/health-alerts/cooking-oil-good-children Accessed Date4June 2020
Are You Using The Best Cooking Oil For Babies? Find Out! https://www.babydestination.com/best-cooking-oil-babies Accessed Date4June 2020